खुल्यो, छुल्ठिम गुरूङ को एस्तो रहस्य ! | Glamour Nepal
पहिलो पटक फिल्म “नोभेम्बर रेन”मा सहायक भूमिकामा देखिएकी थिइन् – छुल्ठिम गुरूङ । सोहि फिल्ममा आर्यन सिग्देल र नम्रता श्रेष्ठको मुख्य भूमिकाथियो। फिल्म निर्माण युनिटले फिल्मको प्रमोसनमा छुल्ठिमलाई खासै महत्व दियका थियनन।
तर अभिनय र सुन्दरताका कारण छुल्ठिमको प्रशंसा भयो। नेपाली फिल्मी बजारमा सम्भावना बोकेकी अभिनेत्रीका रुपमा लिइयो। त्यसपछी उनलाई के भयो कुन्नी ? उनको चर्चा चुलिदै गर्दा फिल्म नखेल्ने घोषणा गरिन् र गुमनाम भईन।
फिल्म नखेल्ने घोषणा गरेकी छुल्ठिमको बोलि २ वर्ष पनि टिक्न सकेन। अहिले उनि आफैँ निर्मात्री बनेकी छन्। फिल्ममा उनैको लिड रोल पनि छ। नायिका रेखा थापा यो फिल्ममा पहिलो पटक भिलेनको रुपमा देखिदैछिन्। “डायरी” शिर्षक रखिएको फिल्मको सुटिंग अहिले धमाधम भईरहेको छ।
बल्ल पो उनको रहस्य खुल्यो! “नोभेम्बर रेन”पछि फिल्म नपाएर पो उनले फिल्म नखेल्ने घोषणा गरेकी रहिछन्। नत्र त अहिले आफैँ लगानी गरेर, आफैँ हिरोइन बन्थिन् होला र ? कि कसो ? तपाईको विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला!
नायक / नायिका नै अनुपस्थित हुँदा आक्रोशित देखिए निर्देशक
दयाहाङ्ग राई र प्रियंका कार्की अभिनित “लालटिन” टिजर रिलिज